Wiki ho an'ny neurons - Semalt Expert
Amin'ity lahatsoratra ity, Oliver King, ilay Semalt Mpanantanteraka Success Manager, dia hilaza aminao ny fomba ahafahana mampiova ny fampahalalam-baovao an-tserasera ao amin'ny Wikipedia (Wiki). Ny mpahay siansa sy ny matihanina dia nanangona angon-drakitra an-tapitrisany hatramin'ny neurons an-tapitrisa ao amin'ny atidohantsika, ary ny ankamaroan'izy ireo dia nampiasa ny angon-drakitra mba hamoronana Wiki Wiki ho an'ny neurons. Ny vohikala, NeuroElectro, dia nanampy tamin'ny fampitomboana ny fandrosoana momba ny fikarohana momba ny neuroscience ary nanome loharanom-pampahalalam-baovao ho fanangonana sy fampitahana ny angon-drakitra momba ny neuronal. Ny famaritana an'io tahiry io dia tsy hita afa-tsy ao amin'ny Journal of Neurophysiology. Ny neurônintsika dia mizara ho karazany maherin'ny 250 mifototra amin'ny endri-javatra ara-batana sy ara-tsaina. Ireo mpikaroka dia nandalina ny toetra sy ny asany amin'ny karazam-pandrefesana isan-karazany nandritra ny taona maro, ary niparitaka an-jatony ireo taratasy mivalona sy lahatsoratra an-jatony. Ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversite Carnegie Mellon vao haingana dia nitodika tany amin'ny angon-drakitra ary nanandrana nandamina ny antontam-baovao tamin'ny fomba tsara kokoa. Nathan Urban avy amin'ny departemantan'ny BrainHubSM ao amin'ny oniversite dia milaza fa raha te hanangana atidoha ianao, dia tokony ho fantatrao hoe inona ny faritra no tena miasa. Fantatray ny zava-drehetra momba ny neurônina ary ampahany amin'ny atidoha atsy izy ireo, saingy kely ihany no fantatra momba ireo asany sy ireo toetra an-tsipiriany. Mba hampitomboana ny fahatakarana ny neurônina dia tokony hamaritra ny fomba fiasan'izy ireo sy ny fananany.
Manangona, manatsara ary manatsara
Nanangona sy nandamina ny antontan-kevitra ho an'ny karazana neurons isan-karazany ny fitsangatsanganana avy amin'ny University of British Columbia. Avy eo dia namoaka ny angon-drakitra tao amin'ny bilaoginy manokana izy. Rehefa nanangona ny angon-drakitra nampiasaina tamin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ny mpikaroka sasany dia nahita fa diso izy io ary tokony hapetraka haingana araka izay azo atao. Ny Tripathy sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrona dia nanamarina ny angon-drakitra fa tsy namorona rafitra izay mety hisakana ny mpiserasera tsy hibanjina ny tranonkala.
Tsy dia mahazatra ny fahasamihafana amin'ny Neuron
Ny tranonkala dia nanampy ireo mpikaroka hahita ny vondrona neurons izay manana toetra ara-nofo mitovy ihany koa ary manome fahatakarana tsara kokoa ny asan'ny neurons. Ohatra, raha hitan'ny mpahay siansa fa voan'ny otrikaretina ny neuron ao amin'ny neocortex ao amin'ny atidohantsika, dia mety hijery ireo neuron hafa izy ireo ary hiantoka tsara ny asany. Amin'io fampahalalana io dia nisy dika maro momba ny fikarohana nosoratana, ary novolavolaina ny dingana vaovao. Mba hahafantarana ny fampiasana ny neuroelectro.org dia nampitaha ny siantifika sasany momba ny angom-pahaizana electrophysiologique ahitana karazana neurons maherin'ny telopolo izay niresaka momba ny karazana literatiora samihafa. Anisan'izany ny neuron piramida ao amin'ny hippocampus, izay tompon'andraikitra amin'ny fitadidiantsika, ary ny neuron dopamine amin'ny midbrain, izay tompon'andraikitra amin'ny fiankinan-doha sy ny fitondran-tenantsika. Ny Ivon-toerana Nasionaly momba ny Fahasahiranana, ny Fandaharan'asan'ny Fikambanana Enhancement Research Universal momba ny fahasalamana ao Pennsylvanie ary ny National Science Foundation dia nanohana io asa io.
Navoaka ny gazety
Niasa tao amin'ny laboratoara Urban i Shreejoy J. Tripathy ary nahazo mari-pahaizana tao amin'ny Oniversiten'i Pittsburgh Center ho an'ny Fandaharam-pahaizana momba ny fahasalaman'ny Neural (CNBC). Nifidy lapan-tsoratra maherin'ny 10.000 izy, izay nampifangaro ny tahirin-kevitra ara-pahasalamana amin'ny antsipiriany momba ny valim-pifidianana. Nampiasa ny algorithm amin'ny alàlan'ny alàlan'ny finday amin'ny famakiana ireo taratasiny rehetra izy. Ity rindrambaiko ity dia nahita tsara ny fizarana ny neurônina sy ny fampahafantarana momba ny fomba nanatanterahana ny fanandramana Source .